Quruxda madow / Afrikaanka: sida dib loogu soo nooleeyaa da'da dahabiga ah ee Afrika ee waayihii hore? Gacaliye Madoow / Afrikaanka, xusuusnow wakhtigii aan boqorrada iyo Qaanuunka adduunyada iyo maanta haysannay, iyadoo waxoogaa wax laga beddelayo, in kasta oo xilliyadan xasillooni darrada ay jirto, annaga uun baa iska leh
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 7, 2019 00: 00 No Comments
Sida ku xusan heerkeenii baraarugnimada ee niyada, si dib loogu nooleeyo da'dan cusub ee dahabiga ah ama loo xanuunsado da ’kale oo rajo beel ah iyadoo kuxiran sida aan nahay, waxaan garowsaneynaa marka loo barbar dhigo taariikhda oo dhan iyo gunta xun ee taasi kaliya , qof indha la'a ama qof hurda, wali ma arkin.
Sidaas awgeed, waxaa na saaran waajib ah inaan ilaalino sumcadan, Boqortooyada iyo sidoo kale sharafta iyo Wadajirka Dhaqanka oo na sifeeyay kuwii hore si aan u maalgashanno mustaqbalka mustaqbalkeena. Annaga ayay na saaran tahay inaan madaxa kor saarno taaj quruxsan iyo ammaan. Cidina annaga noo yeeli mayso. " Marka, waa waqtigii loo baahnaa in la shaqeeyo maanta iyo hadda.
Xumaantii hayb-sooca hay'ad ahaan: nidaamka waxbarasho ee loogu talagalay dadka madow / Afrikaanka, oo lagu daydo moodalka reer galbeedka ayaa waxyeelo u leh dadkeenna "Tani waa wax lagu daydo hay'adaha"
Sep30 03: 30